आज पुष १३ गते मंगलबार , शुभ-अशुभ कस्तो रहला तपाईको दिन ? हेर्नुहोस् राशिफल ! – Hamro Nepali Samachar
Home/ राशिफल/आज पुष १३ गते मंगलबार , शुभ-अशुभ कस्तो रहला तपाईको दिन ? हेर्नुहोस् राशिफल !
तपाईले आफ्नो रिसलाई काबुमा राख्न पर्नेछ। कुनै पनि कार्यले सम्बन्ध बिग्रन सक्छ। शरीरमा उर्जा र स्फुर्तिको कमी हुनेछ। मानसिक अस्वस्थताको स्थितिमा मन कुनै कार्य गर्नको लागि प्रेरित हुनेछैन। कुनै धार्मिक वा मांगलिक प्रसंगमा उपस्थित रहनुहुन्छ।
कार्य सफलतामा ढिलाई र शारीरिक अस्वस्थताको कारण निराश अनुभव गर्नुहुन्छ। अत्यधिक कामको बोझबाट थकान र मानसिक बेचैनी रहनेछ। नयाँ आर्य आरम्भ नगर्नुहोला। खानपिनमा ध्यान राख्नुहोला। योग्य ध्यानबाट तपाई मानसिक रुपले स्वस्थ्य रहन सक्नुहुन्छ।
शारीरिक वा मानसिक ताजगी र प्रफुल्लताको अनुभव होला। कुटुम्ब तथा मित्रसँग घुमफिर एवम् पार्टीको आयोजन हुनेछ। मनोरंजनको लागि सबै सामग्री उपलब्ध हुनेछ। विपरीत लिंगीय पात्र तर्फ अधिक आकर्षण हुनेछ।
तपाईको दिन खुशी र सफलतामा बित्नेछ। पारिवारिक सदस्यसँग घरमा सुख-शान्तिमा दिन बित्नेछ। पेसा गर्ने व्यक्तिबाट लाभ होला। प्रतिस्पर्धीबाट पराजित हुनुहुन्छ। स्त्री मित्रसँग भेट होला। स्वास्थ्य स्वस्थ रहला।
लेखन, साहित्यको क्षेत्रमा केहि नयाँ सिर्जना गर्नको लागि प्रेरणा मिल्नेछ। विद्यार्थीले अध्ययनमा उत्तम प्रदर्शन गर्नेछ। प्रेममा सफलता र प्रिय व्यक्तिसँग भेट हुँदा मन हर्षित हुनेछ। स्त्री मित्रको सहयोग अधिक मिल्नेछ। शारीरिक स्वास्थ्य स्वस्थ रहनेछ।
हरेक कार्यमा प्रतिकुलता अनुभव गर्नुहुनेछ। स्वास्थ्य खराब होला। मन चिन्ताग्रस्त रहला। पारिवारिक सदस्यसँग झगडा हुँदा अशान्ति रहनेछ। पानीसँग डर रहनेछ। कुनै पनि कागजमा हस्ताक्षर गर्नुअघि विचार गर्नुहोला।
शुभ वा धार्मिक अवसरमा यात्राको आयोजन गर्नुहुन्छ। व्यवहारिक अवसरमा बाहिर जानुहुनेछ। विदेशबाट समाचार मिल्नेछ। नयाँ कार्यको आअरम्भ गर्नको लागि शुभ दिन छ। शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य स्वस्थ रहला।
पारिवारिक झगडा हुन सक्ला। पारिवारिक सदस्यसँग गलत धारणाबाट बच्नुहोला। मनमा उत्पन्न नकारात्मक विचारलाई टाढा गर्नु नै ठिक छ। विद्या प्राप्तिमा विद्यार्थीलाई अवरोध होला। अनावश्यक धन खर्च नहोस् यस कुराको ध्यान राख्नुहोला।
तपाईको दिन शारीरिक र मानसिक रुपले स्वस्थ रहला। आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै तीर्थयात्रामा जानुहुनेछ। दाम्पत्यजीवनमा निकटता र मधुरता रहनेछ। मान- प्रतिष्ठा वृद्धि होला।
दिन सावधानीपुर्वक बिताउनुहोला। अधिक परिश्रम गर्दा पनि कम सफलता मिल्नेछ। पारिवारिक वातावरण अशान्त रहला। अदालती कार्यमा सम्हालेर कदम उठाउनुहोला। धार्मिक तथा सामाजिक कार्यमा भाग लिनुहुन्छ।
नयाँ कार्यको सुरुवात वा योजना बनाउन सक्नुहुन्छ। पेसा वा व्यवसायमा लाभ प्राप्त होला। स्त्री मित्र प्रगतिको सहायक बन्नेछ। आर्थिक लाभको दृष्टिले दिन निकै राम्रो छ। समाजमा प्रतिष्ठा बढ्नेछ। सन्तानको प्रगति हुनेछ।
पेसा वा व्यवसायमा सफलता पाउनाले तथा उच्च अधिकारीको प्रोत्साहक व्यवहारले अत्यन्तप्रसन्न रहनुहुन्छ। व्यापारीको व्यापार वृद्दि होला। पिता तथा वृद्दको तर्फबाट लाभ मिल्नेछ। मान-सम्मान वा उच्च पद प्राप्त होला।